Uyenza njani ikhava yencwadi oza kuyithumela ukuze uprinte | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isimbozo, ikhava yangemva kunye nesihlunu.
Umbuzo omnye oza rhoqo kubaqambi, kunye nababhali abafuna ukupapasha iincwadi zabo kwaye bathathe uxanduva loyilo ngokwabo, yindlela okanye ngayo ifomathi thumela ifayile yencwadi kumshicileli.
Into yokuqala ekufuneka siyazi kukuba siza kuthumela iifayile ezimbini ezahlukeneyo: enye inomzimba wesicatshulwa, kunye nomnye onezikhuselo ezingaphambili nezingasemva.
Kweli nqaku siza kuchaza ukuseta njani ikhava yefayile.
1 Amacandelo efayile
3 Imowudi yombala
Kubalulekile ukuba uhlala usebenza kwiinkqubo ezikhethekileyo ezinjenge-Photoshop, i-Indesign okanye i-Illustrator ukuyila ikhava. Iifayile ezithunyelwa kumaphephandaba kufuneka zibe nezicwangciso ezithile kubungakanani, imibala kunye nokusonjululwa kwemifanekiso, kwaye oku kunokufezekiswa kwezi nkqubo. Ngaphandle koko, ushicilelo lunokuba nesiphene kunye nomgangatho ophantsi. Kumzekelo esiza kuwusebenzisa Indesign.
Ifayile kufuneka iqulethe iinxalenye ezintathu: isiciko esingaphambili, isiciko sangasemva kunye nomqolo, kwaye yonke into kufuneka ifakwe kumzobo un Umsebenzi omnye. Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, iodolo kufuneka ibe yile ilandelayo: ikhava yangasemva, umqolo kunye nephepha elingaphambili.
El Ubungakanani bekhava buya kuxhomekeka kwifomathi yencwadi ukuba umyili okanye umbhali ukhethe. Siza kuthatha njengomzekelo umlinganiso oqhelekileyo we-15 cm ububanzi x 23 cm ukuphakama.
El ubungakanani besinqe iya kuchazwa ukusuka Inani lamaphepha incwadi yethu inayo nohlobo lwephepha amaphepha aya kuprintwa kulo. Kukhethwa ukuba udibane nomshicileli kuqala ukuze babale ubukhulu bebonke, kwaye uthathe lomlinganiso njengesalathiso kuyilo. Kumzekelo wethu siza kubeka i-1,5 cm ububanzi x 23 cm ukuphakama.
Useto lobungakanani befayile: ikhava yangasemva, umqolo kunye nephepha elingaphambili.
Kuya kufuneka usoloko ubeka ifayile ukophaOko kukuthi, indawo eyongezelelweyo egqitha zonke iimayile zangasese ze-canvas: phezulu, ezantsi, ekunene nasekhohlo. Kuyacetyiswa ukuba usebenzise i-0,5 cm.
Kubalulekile ukubala esi sithuba ukunqanda iziphene enokuveliswa kwiphepha elingaphezulu xa usika. Ifayile ngaphandle kwegazi inokushiywa yimigca engenanto okanye izithuba kwiphepha elishicilelweyo.
Ukopha kwilaphu lomsebenzi.
Impazamo eqhelekileyo Esizibophezelayo xa sithumela iifayile ukuba siziprinte, kukwenza oko usebenzisa ifayile ye- Ifomathi yombala weRGB. Le mibala yemibala isebenza ngokusekwe kumxube obomvu, oluhlaza okotshani kunye nohlaza okwesibhakabhaka, kwaye ikhethekileyo kwimidiya yedijithali, iikhompyuter kunye nokuhamba. Ukuba siyila kwi-RGB kwaye siyithumela kumshicileli, umbala esiya kuwufumana uya kwahluka ngokukodwa kwinto esiyibonileyo kwiscreen.
Zonke iifayile maziprintwe kufuneka iqulunqwe kwi Imowudi ye-CMYK, esebenza ngokusekwe kuCyan (Luhlaza), Magenta, Mthubi noMnyama. Ngale ndlela, umbala esiwubonayo kwiscreen ngumbala esiya kuwufumana kwifomathi eprintiweyo.
Kuya kufuneka simisele ifayile kwifayile ye- isisombululo se I-300 ppp (amachaphaza nge-intshi), kwaye yonke imifanekiso okanye izinto esizisebenzisayo kuyilo lwekhava mazibe zezi umgangatho olungileyo ngesisombululo esinye. Ngale nto siya kuyiphepha into yokuba ushicilelo alubukhali okanye lukhangeleka ngathi luyi-pixelated.
Into ekufuneka siyithathele ingqalelo kukuba onke la maxabiso: ubungakanani, imo yombala kunye nokusonjululwa, kufuneka sizilungiselele ngaphambi kokuyila, kwaye ungatshintshi amaxabiso kwifayile esele yenziwe kwimowudi ye-RGB kunye ne-72 dpi, umzekelo, kuba umgangatho wokuprinta uya kuba mbi.
Ukusuka kwi-Indesign, sithumela ngaphandle yethu ifayile yokugqibela kwiPDF ukuyithumela kumshicileli. Khumbula ukuseta i-PDF njenge: Umgangatho ophezulu wokuPrinta, Qiniseka ukuba isisombululo si I-300 ppp kwaye akukho khetho lokunyanzelwa lukhethiweyo lunokuhlisa umgangatho, kwaye kubandakanya ukopha ngaphakathi kwendawo yefayile.
Cwangcisa isisombululo kwi-300 dpi, kuMgangatho oPhezulu wokuPrinta.
Cwangcisa i-PDF ukuze ibandakanye ukuphuma kwegazi.
Kwaye ulungile! Sele unefayile yokugubungela iPDF emiselweyo ukuba uyithumele kumshicileli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyenza njani ikhava yencwadi oza kuyithumela ukuprinta